ရာသီဥတုသဘောတူညီချက်: လူအဆင်းလှသောဂျာကင်အင်္ကျီမာတင် Vrijland လုယက်
သင်အမှန်တကယ်ရုံပြုံးရယ်သင့်တယ် ခေတ်မီ လုယက် '' ရာသီဥတုသဘောတူညီချက် '' ၏အမည်အောက်မှာလူအကြောင်း။ အထူးသဖြင့်အာဏာရှင်တွေရဲ့ newspeak ကြှမျးကရှေးခယျြ။ ထိုသို့ပြုမှမည်သို့: ,,ကျနော်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လူတိုင်းကိုသှေးဆောငျပါမညျ။ ဒါကပြောင်းဖို့အမှုအရာရှိနေကြသည်မဟုတ်မဆိုလိုပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သူတို့အားအပြောင်းအလဲများကိုသုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းအချိန်တစ်မျိုးဆက်တို။ ''
အာဏာရှင်တွေရဲ့ newspeak အတွက်အရာအားလုံးကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာများပါဝင်သည်: မသင်မနေရမိမိဆန္ဒအလျောက်ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုမစ်ရှင် (အစစ်မှတပ်များစေလွှတ်မည်), စိတ်ကျန်းမာရေး (ထောင်ချခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး) နှင့်အခြားသူများ။ သို့သော်ဤစီရင်ချက် "လည်းချက်ရွေးကောက်တော်မူအာဏာရှင်တွေရဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့မည်သူမဆိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းတာပေါ့။ ဆိုလိုသည်, အလေ့အကျင့်အတွက်, သင်တန်း, အဖြစ်အများကြီး "အဖြစ်ကျနော်တို့ခက်ခဲသူတို့ကိုစစ်ကြောသမထားဘူးသူမည်သူမဆို '' လိမ့်မည်.
သို့သျောလညျး 2030 အတွက်ပြီးသားတဆယ်တနှစ်များအတွက်ရာသီဥတုသဘောတူညီချက်၏ရည်ရွယ်ချက်, ထက်ဝက်နီးပါး2အတွက် CO1990 ထက်လျော့နည်းထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှော့ချအဖြစ်အစီအမံ၏ရှည်လျားသောစာရင်းနှင့်အတူအစိုးရအလာခင်မှာ။ ဒါ့အပြင်အပူပန့်များနှင့်အိမ်၏ insulator တွင်လည်းအဘို့ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ချေးငွေများရှိလိမ့်မည်။
အနာဂတ်မှာထုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခံရဖို့သေးသည်နှင့်တူသို့သော်အတိအကျဘယ်လိုအရာခပ်သိမ်းကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့အစိုးရကအဓိကအားပွော့ဤစကားသည်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့လူတိုင်းသူတို့အိမ်ပြန်စေချင်ဘယ်လောက်ဆုံးဖြတ်အခမဲ့ဖြစ်သည့်ဝန်ကြီး kajsa ollongren (အိမ်) ကပြောပါတယ်။ ,, အချို့အသေးစားအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်လိုသူပြည်သူ့ကရေတိုရေရှည်အပေါ်အကြံဉာဏ်ကိုရှာခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘွိုင်လာပိုကောင်းအချိန်အဆညှိနိုင်မဖြစ်နိုင်သည်။ ''
၎င်းတို့၏နေအိမ်များကာကှယျသို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ကိုချွတ်မယ့်အားဖြင့် - - အိမ်ပိုင်ရှင်ကယ်တင်သင့်ကြောင်း, မဟာစစ်တိုက် Ollongren ပိုပြီးသတိထားဖြစ်ပါတယ်။ ,, သင့်ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးကာကွယ်ပေးနိုင်မပါရှိဘူးဆိုရင်? ထိုအခါသင်သည် "။ ကြောင်းထောက်ပံ့ကြေးရ" ဒါပေမယ့်မည်မျှထောက်ပံ့ကြေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အသုံးအနှုန်းများအပေါ်စခွေငျးငှါ, မေးခွန်းတစ်ခုအမှတ်အသားနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါဟာအမျိုးသားရေးရန်ပုံငွေလူတို့သည်မိမိတို့နေအိမ်ထိန်းသိမ်းအကြောင်းကို 25.000 ယူရိုချေးနိုင်သည့်အပူကြောင်းရှင်းပါတယ်။ အဘယ်သူသည်အချို့သောပိုက်ဆံချေးသို့မဟုတ်အိတ်ကပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထဲကပေးဆောင်ရန်မသဘောမျိုးရှိပါတယ်, ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆုံးရှုံးနှစ်ပေါင်းအတော်များများကျော်မြင့်တက်ဓာတ်ငွေ့ဝန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါဟာအဓိကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူ 2021 ၏အဆုံးသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်တစ်နည်းနည်းနဲ့စမတ်ပုံရသည်။ ထို့နောက်အားလုံးမြူနီစီပယ်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စွမ်းအင်အဘို့ရှင်းလင်းစွာအစီအစဉ်ရှိရမည်။ အထူးသဖြင့်မြို့ကြီးများအတွက်ကွန်ရက်များတည်ဆောက်ထားလိမ့်မည်အပူ။ အဲဒါကိုချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းအိမ်များခုနှစ်, ဘွိုင်လာတံခါးကိုထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ ,, သင်သည်တစုံတခုကိုလုပ်ပေးယခုအချိန်တွင်မှာ, '' Ollongren ကဆိုသည်။
ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်မှာတော့ဒါဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းတက်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်းချိုသာကဆိုသည်။ ကျနော်တို့လက်တွေ့မှန်လျှင်, ဤသူသည်သင်တို့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမှဓာတ်ငွေ့ကနေပြောင်းပြိုးထောငျရမညျဖွစျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကပိုက်ဆံကုန်ကျနှင့်ဓာတ်ငွေ့ဥပမာ 90% နှင့်လျှပ်စစ်မီးပေမယ် 1% ကျဆင်းလာမြင့်တက်အဖြစ်, သင်ကဝန်ကြီးအဖြစ်မုသာမသုံးခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းနေဆဲချိန်ခွင်လျှာကိုပိုပြီးပျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးများ၏ထိရောက်မှု, ဥပမာအဘို့အိမ်တော်ကိုအပူအနိမ့်လျှင်အပြင်, သင်ပိုမိုအာဏာကိုသုံးစွဲဖို့ရှိသည်နှင့်သင်လည်းဟန်ချက်အပေါ်ပိုပြီးဖြုန်းနေကြတယ်။
ဒုတိယအပိုဒ်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများပေါ်တွင်သင်၏နေအိမ်အကဲဖြတ်ရန်မည်သူတစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံငှားရမ်းဖို့မသင်မနေရလိုအပ်ချက်တစ်ခုအရိပ်အမြွက်ပါပဲ။ သင်ဤပိုက်ဆံကုန်ကျကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအစီရင်ခံစာတက်ဆွဲရန်တာဝနျရှိကွောငျးမညျဖွစျကွောငျးအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။ checkout!
တတိယအပိုဒ်မှာတော့တစ်ဦး palliative ပြီးသားနေဆဲဆုံးဖြတ်ရမယ့်ရန်ပုံငွေ၏ပုံစံကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ ကျနော်တို့သို့သော်ပြီးသားသာထောက်ပံ့ငွေယူဆနိုင်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသင်ဖြစ်ကောင်း compulsorily (သင်တချို့မဖြစ်မနေပြောင်းလဲမှုများကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်သူတစ်ဦးမဖြစ်မနေစွမ်းအင်အတိုင်ပင်ခံငှားရမ်းထားင့်ပြီးနောက်) အကောင်အထည်ဖော်ရန်ပြောင်းလဲမှုများဝတ်ထားသည်။
ထိုအခါအခွန်ပိုက်ဆံကြီးမားတဲ့အိုးကလူသည်ဤချမှတ်သောအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ပိုက်ဆံချေးနိုင်တဲ့အနေဖြင့်အမျိုးသားရေးအပူရန်ပုံငွေများအတွက်ဘေးဖယ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါကသိသာထင်ရှားစွာပင်အချို့သောအတိုးနှုန်းမှာချေးငွေဖြစ်လိမ့်မည်, လူများရုံလည်ချောင်းအပေါ်ဓါးတင်ထားတော်မူမည်ဆိုပါကသငျသညျကိုပြောင်းလဲစရာမလိုပေ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အခွန်သိသိသာသာတက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပြောင်းဖို့, သင်ကတရားဝင်အစီရင်ခံစာကိုပွငျဆငျရစေရမယ်နှင့်သင်အနည်းငယ်ထောက်ပံ့ငွေရနိုင်ပေမယ့်အများအားဖြင့်ပိုက်ဆံအတော်လေးတွေအများကြီးချေး"။ တိုတိုမှာတော့လူတွေနေဆဲပင်နောက်ထပ်ကြွေးမြီသို့အတင်းအဓမ္မကျန်ကြွင်းသို့မဟုတ်ညာဘက်ပေးဆောင်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်နေကြသည်။ အဘယ်သူကိုသနည်း အဆိုပါလူအုပ်စုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်လူတွေအတွက်မော်တော်ကား၏လယ်ပြင်တွင် created နှင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်အားလုံးစျေးကြီးသည်။ Read ပေမယ်ပင်:
အစိုးရကလျှပ်စစ်ကားများဖို့ဒတျချြ switch ကိုမှကြိုက်ခဲ့သည်လိမ့်မယ်။ ဒါကလည်းအဆင်သင့်ထောက်ပံ့ငွေတစ်စက္ကန့်လက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကနဦးကရာသီဥတုအစီအစဉ်အသစ်ပါဝါကားများများအတွက်ဝယ်ယူထောက်ပံ့ငွေ 6000 ယူရိုလျှောက်ထားပေမယ့်ထောက်ပံ့ငွေအလုပ်ဖြစ်ပါသည်လိမ့်မယ်။
အခုရာသီဥတုသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်အသစ်ဝယ်ယူထောက်ပံ့ငွေ '' TBC အဖွဲ့ '။ တိုတိုမှာတော့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းကားတစ်စီး jack ကိုမဝယ်ချင်သူကလူများ, ယခုမှရှိမရှိအတိအကျမသိရပါဘူး။ အဲဒီငွေပမာဏပြီးသားအချို့ပုံရသည်, 6000 ယူရိုထက်သိသိသာသာနိမ့်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ဒတျချြကိုသူတို့ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်ဒီဇယ်ကားကိုများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါသောအစိုးရအကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမက, မ, ဒါပေမယ့်အချို့ယာဉ်မောင်းအချို့အပိုပိုက်ဆံကြာပါသည်။ ဒီဇယ်အခွန်လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်းခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းတိုးပွါးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အသစ်ဝယ်ယူထောက်ပံ့ငွေစိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်: "သင်ကားမဝယ်ရသောအရာကိုမသိကြပေမယ့်လိုအပ်ပါသည်။ " ကောင်းပြီ, သင်ဆဲဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်ဒီဇယ်မောင်းဖို့ရှေးခယျြမှုအများရှိသော်လည်း, ပဲသွားပါ မြားစှာ ပိုပြီးပေးဆောင်။ ဒါကသိသိသာသာလစာအများကြီးပိုကျနော်တို့ကအလေ့အကျင့်ခုနစ်ခု-လိဂ်ဘွတ်ဖိနပ်၌ဖြစ်လိမ့်မည်သောသူအပေါင်းတို့ကိုမှတ်မိနိုင်သည့် "ခြေလှမ်းများ" သဘာတွေ့ကြုံတတ်၏။
တိုတောင်းသောများတွင်သင်တဦးတည်းသိသာအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ CO2 ရာသီဥတု hoax နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွေအများကြီးကစား: အဆိုပါအိတ်ကပ်ထဲကနေလူတွေလုယူဖို့ ပို. ပင်ပိုက်ဆံတစ်ဦးစှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြ Creating.
ဥရောပတိုက်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာဇွန်လ၏အပူဆုံးကာလ၏ဆွေးနွေးချက်လည်းမရှိသည့်အခါထူးခြား, ရာသီဥတုသဘောတူညီချက်များ၏ကြေငြာချက်တစ်ပါတ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လိုအပ်သောနည်းပညာပြုပြင်မွမ်းမံကြံ့ကြံ့ခံဖို့လုပ်ဖို့တည်ရှိကြမည်မဟုတ်။ ဒါဟာအများစု '' ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ '' ၏အသွင်အောက်မှာမမျို။
အဘယ်မှာရှိအထောက်အထားသမျှသောဤစွမ်းအင်ကိုအသွင်ပြောင်းများ၏အပြုသဘောဆောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြသလဲ? ထို့ကြောင့်လျှပ်စစ်ကားများအတွက်ဘက်ထရီ၏, ထုတ်လုပ်မှုအဓိကပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်များနှင့်လျှပ်စစ်မီးဓါတ်ငွေ့ကနေ switch ကိုအပေါ်အများအပြားစွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိပါသည်။ နှင့်လျှပ်ကာအမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်များ၏ညစ်ညမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ?
ကျနော်တို့တစ်ဖန် '' အဆင်းလှသောအပိုင်းအစသက်သေခံနေကြသည်ပြဿနာ, တုံ့ပြန်မှု, ဖြေရှင်းချက်ယင်းမီဒီယာနှင့်နိုင်ငံရေးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖန်တီးပြဿနာ hyping သောခုနှစ်တွင်; အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုအတူတူပင်ဝါဒဖြန့်စက်အားဖြင့်လူတို့တွင်နှိုးဆော်သဖြင့်, လူအများ၏လည်ချောင်းတွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ထို့နောက် (စျေးကြီး) ဖြေရှင်းချက်။
CO2 အောက်စီဂျင်စေရန်သစ်ပင်များနှင့်အပင်အသုံးပြုတဲ့လေထုထဲမှာလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယခင်ကကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းသည်နှင့် CO2 တိုး (ဤတိုင်းတာသောတိုတောင်းသောအချိန်ကာလအတွင်းကျင်းပ) ကလူသိများတဲ့တိုင်းတန်ဖိုးများသောလေထုထဲတွင်ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့ပမာဏတည်ရှိသည် ၏ရလဒ် တိုးမြှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလှုပ်ရှားမှု တဦးအကြောင်းမရှိ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု။ သင်လိုအပ်သောသုတေသနလုပ်နေတာထဲတွင်ရှာတွေ့အံ့သောငှါ။ သို့သျောလညျးကိုအင်တာနက်မီဒီယာသငျသညျအတုသတင်းနှင့်သူတို့နေဆဲအမှန်တရားတရားကိုဟောပြောသောထင်ယောင်ထင်မှား၏မိစ္ဆာငာမှထမြောက်ဖို့ကြိုးစားနေသည်ဟု desinfo created သတိဤမျှအပြည့်အဝချပစ်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်အတိုက်အခံအတောအတွင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ငါးတစ်ချိန်ကအတိုက်အခံဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုသင်္ဘောတင်နေတယ်ဆိုရင်, ထိုသင်္ဘောကိုနစ်မြုပ်နှင့်ထပ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာနှင့်အဟောင်းသောနိုင်ငံရေးအလို့ငှာသင်္ဘောရုပ်သိမ်းရေနစ်။
သငျသညျရာသီဥတုသဘောတူညီချက်သကဲ့သို့အမျက်ထွက်မက်ဆေ့ခ်ျရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်နောက်တဖန်ပြောင်းလဲမှုအထက်တွင်ကိုမျှော်လင့်ရမည်ကိုသတိရပါ။ အဆိုပါဟိဂ်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ဓားပြဂိုဏ်းကိုသင်ကူညီပေးရန်ရှိနေကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ကလက်ဝဲနှင့်လက်ယာ, ရှေးရိုးစွဲနှင့်အတိုက်အခံများ၏ကစားမှတဆင့်ဒီမိုကရေစီသာပုံပန်းသဏ္ဌာန်, play ။ ဒါကြောင့်သင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်အရေးယူသွားကြဖို့ရှိသည်။ ဖတ် ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖွင့်.
source link ကို entries တွေကို: ad.nl
PowNed Poelenburgse သရုပ်ဆောင်တွေ, extras နှင့်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ထား vloggersrel
Tags:: အထူးပြုလုပ်ထားသော, ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်, ရာသီဥတုသဘောတူညီမှု, ခြေးယူ, ခြေးငှေ, ဝန်ကြီး, တမျိုးသားလုံး, Ollongren, အပူရန်ပုံငွေ
29 မှဇွန်လ 2019 13: 20
ငါအကောင်း Trutje ကြားဖူးတယ် အကယ်. ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအခွန်ပေးဆောင်ပြီးတော့ငွေကိုပေးဆောင်အခွန်ချေးသင့်ပါတယ် hmmm အလွန်ယုတ္တိအသံ။
သူတို့နှင့်အစိုးရမျိုးတွင်တစ်ပတ်နေဖြင့် crazier ရရှိသွားတဲ့ကြောင်းတကယ်ပဲဒဏ်ဍာရီ။ သင်ကသူတို့ကိုပြီထင်နေလျှင်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုကြားအရာအားလုံးကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်မောင်းထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာထိန်းချုပ်ကားများ, ပြီးသားအပြည့်အဝလျှပ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း, ၎င်းတို့၏အိမ်သို့ finesse ရာသီဥတုအထောက်အထားအတွက်လုပ်?
29 မှဇွန်လ 2019 13: 53
euthanasia ဥပဒေပြဌာန်း၏လျှော့ချလိုက်တာနဲ့အတူကျနော်တို့အကြီးအကျယ် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုဆောင်ခဲ့ရမည်။ နှင့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုရိတ်သိမ်းအပေါ် D666 ဥပဒေပြဌာန်းအတူလည်းတဦးတည်းသောကျောက်များနှင့်ငှက်နှစ်ကောင်အကြမ်းခံသည်။
29 မှဇွန်လ 2019 14: 00
ပိုကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အထောက်အကူပြုဖို့ ..heb သင်သည်ပြီးသား Sarco အလို့ငှာအားလုံးအပြီးသင်နှင့်အတူစတင်သည်😀
"သင်သည်အဘယ်မှာငြိမ်းချမ်းသောမဆို slippage ထားနိုင်ပါတယ်"
29 မှဇွန်လ 2019 16: 15
အတိအကျ Riffian '' သဘာဝ '' ၏အသွင်အောက်တွင်ရောက်မှလုံခြုံ depopulation အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဟုတ်ကဲ့သွားပေမယ့်ပျမ်းမျှနေထိုင်သူ madurodam ပေမယ့်ပင်ကိုရှင်းပြ ..
29 မှဇွန်လ 2019 18: 05
Alas, ယနေ့သူတို့ကကမ်းခြေမှာဒီနွေးနေ့၌ထိုင်။ နေရောင်ကိုနွေရာသီစတင်နေပြီ, ဘီယာစျေးပေါဖြစ်ပါသည်, ထွန်းလင်းနေသည်။ ယောက်ျား, မိန်းမ, etc အတူတူလိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။
အကြင်သူသည်အထွေထွေလူဦးရေအထဲတွင်မျှတည်ထားပါမှဆက်လက်ဒယ်အိုးအတွက်ဤမျှကာလပတ်လုံးရန်လိုသောလူဝင်မှု '' အထက်တန်းလွှာ '' မီးဖြည်းဖြည်း Stokes oh .. နေထိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ကိုယ်နှိုက်မှာရာသီဥတုသဘောတူညီချက်သိသာထင်ရှားစွာပင််၏ကန့်သတ်တောင်ဆင်းရဲတဲ့အီးယူနိုင်ငံများလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါသူတို့ကတတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမူကား, ထို့ကြောင့်က ISO စံချိန်စံညွှန်းများ eigelijk ။ ရှည်လျားသောကြောင့်မတည်ရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမဖြစ်ရသောအီးယူနိုင်ငံများအကြားက "အခမဲ့" ယှဉ်ပြိုင်မှု, နေထိုင်ကြသည်။
29 မှဇွန်လ 2019 19: 56
ဒီမှာထပ်ထိန်းချုပ်ထား oppostion ပက်ထရစ် Moore က, နှစ်ဆအောက်ခြေကသူပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်ဒါခေါ်အစိမ်းရောင်ဂျာနယ်လစ် LHBTQ အမှတ်တံဆိပ် Greenpeace သဘာအတူ ထား. , သူအကြာတွင်ပြုဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အကြံပိုင် Greenpeace, ဆန့်ကျင်ထိန်းချုပ်ထားအတိုက်အခံရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မည်။
အတိုက်အခံထိန်းချုပ်ထား box ထဲမှာပက်ထရစ် Moore ရဲ့ကြှမျးကစစ်တုရင်အပြောင်းအရွေ့
29 မှဇွန်လ 2019 22: 19
ကောင်းပြီ, "ဂျာမန်" ။ ဒါကသူတို့ရဲ့ဝှက်ထားသောနိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။
29 မှဇွန်လ 2019 23: 08
သက်တံ့လိုဂိုဤနေရာတွင်အဆိုပါ nauseating မူလအစများမှာ Freemasonry / သစ်ကိုအသက်အရွယ်စသည်တို့ကိုသည် Kabbalah ဖို့သွယ်ဝိုက်ရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလည်ချောင်းများကတွန်းရရှိကြောင်းဂျူးဆန်းကြယ်မှုများသွန်သင်ချက်တွေကို babylonsiche ဖြစ်ပါတယ် ..
လူမျိုးအဘို့အ Kabbalah နှင့်တှေးတောဆငျခွ
29 မှဇွန်လ 2019 23: 15
၎င်း၏လွန်ကျူးခြင်းအကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ဖျက်ဆီးခံရဒါကရေလွှမ်းမိုးသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူနောဧ၏ကျမ်းစာပုံပြင်ထဲမှာပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်သက်တံ့။ သက်တံ့ - "မိုဃ်းတိမ်၌ငါ့သက်တံ့" - က၎င်း၏အပြစ်များကိုနေသော်လည်းနောက်တဖန်ကမ္ဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့ဘယ်တော့မှရေလွှမ်းမိုးသောနောက်ဂတိတော်၏ဘုရားသခင်သတိပေး "အားလုံးအသကျရှငျအသက်ဝိညာဉ်ကို" ဘုရားသခင်နှင့်အကြားပဋိညာဉ်တရားကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသက်တံ့? ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၏နိမိတ်လက္ခဏာကို thatmakes သက်တံ့အကြောင်းကိုထူးခြားသောကဘာလဲ?
ဥပဒေ, စည်းမျဉ်း, ဒါမှမဟုတ်ငျြ့ကုဒ်ဆန့်ကျင်သွားသည့်လုပ်ရပ်; တစ်ခုပြစ်မှု။
ငါနောက်ထပ်လွန်ကျူးခြင်း (An မျက်စိအမှတ်လက္ခဏာတွေ) အတွက်မျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်
အဆိုပါ LHBTQ အစီအစဉ် "အပြစ်တရားမှတဆင့်ရွေးနှုတ်ခြင်း" ထို့ကွောငျ့ဒီတစ်တမင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
30 မှဇွန်လ 2019 14: 44
30 မှဇွန်လ 2019 16: 33
30 မှဇွန်လ 2019 16: 43
7 မှဇူလိုင်လ 2019 11: 23
အခါမှောင်မိုက်ဒတျချြဇာတ်ညွှန်းထဲကနေယောက်ျားတွေကကျူးလွန်ကျွန်ခံဘို့အပြည့်အဝလျော်ကြေးရ? သိသာထင်ရှားတဲ့ဇာတ်ညွှန်းမယေဘုယျလူဦးရေရဲ့ယောက်ျားလေးများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ။ ကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးသိသာချိုးဖောက်မှုဖို့လျော်ကြေးငွေဘို့စစ်တိုက်လိမ့်မည်ဟုဘောလုံးနှင့်အတူရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများရှေ့နေလည်းမရှိသည့်အခါမျှမန့်သတ်ချက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်သည်သော script ကိုကနေယောက်ျားတွေ၏တရားသူကြီးတစ်ဦးသော script ကိုကနေယောက်ျားတွေစိတ်မပူပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူဝင်မှုရှေ့နေကံမကောင်း, အဘားအစည်းအရုံးထံမှအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟုခံရကြောက်လန့်တက်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူ့ကို / သူမ၏များအတွက်အဆင့်အတန်းဖြစ်ကောင်းညာဘက်အရာလုပ်နေတာထက်ပိုမိုအရေးကြီးလှသည်။
အဆိုပါ "အမြီးအမောက်" ဟုအဆိုပါဇာတ်ညွှန်းထဲကနေယောက်ျားတွေရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အမှောင်ထဲမှာဒတျချြ၏ချန်ပီယံအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဆက်သသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကစမတ် play, သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန် လုပ်. ကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့နှင့်ယခု '' ကာကွယ် '' အဖြစ်လူသိများ။ အဲဒီမဟာဗျူဟာကိုသင်အမြဲ Madurodam ဆိုသည့်မူဝါဒကို back up ။ သာမန်လူတွေကသူတို့အညစ်ညူးသောဂိမ်းများကိုမျိုတတ်၏။
30 မှဇွန်လ 2019 17: 28
လူအပေါင်းတို့သည်အစီအမံ CO2 ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး, လျှော့ချပေမယ့်တရုတ်ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိပါ။ မည်သူမျှလျှပ်စစ်ကားများထုတ်လုပ်မှုကနေနောက်ထပ် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်ဇီဝလောင်စာအပင်မှခုတ်အကြောင်းကိုဘယ်သူမှဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ အချို့သော CO2 ထုတ်လုပ်ပေမယ့်ထင်မှတ်မပေးပါ။
ငါတို့သည်တပြင်လုံးကိုသံသရာ၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုကြပါဘူး။
မကြာသေးမီကစွမ်းအင်အကူးအပြောင်းဘို့ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်ကြောင့်အိမ်တအိမ်၏လျှပ်စစ်စနစ်ဖြင့်အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအစား 3A 40x 25Ampere ချင်လျှင်သင်သည်အနားမှာရပ်နေသည်ကိုတာဝန်ခံတက်မည်မျှမသိရပါဘူး
အဘယ်သူသည်အားလုံးညီတူညီမျှအရာအားလုံးနှင့်ပိုပြီးတွက်ချက်, ရာသီဥတုသဘောတူညီချက်ထို့ကြောင့်အလွန် implausible သည် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုတိုးထက်လျှောက်လျော့နည်းကြောင်းထွက်ချိန်ရောက်လေပြီ။
1 မှဇူလိုင်လ 2019 00: 33
နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြတ်သန်းတဲ့အခါသင်အတိအကျဂျာမနီနှင့်ပြင်သစ်တွင် subdidie ရလိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားရန်။ ထို့နောက်အခြားအဓာတ်ငွေ့ရှိပါတယ်ဗျာ? ညာဘက် ...
ထိုအ ... ဓာတ်ငွေ့ကိုချွတ်နယ်သာလန်နိုင်ငံ, သူတို့က Groningen ကအတွက်ထွန်ယက်ရာတွင်သို့မဟုတ်အလုံအလောက်မကယ်တင်တတ်၏လူတို့နှင့်လည်းရပ်တန့်?
နိဂုံး: ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ကလူကအရမ်းချမ်းသာကြွယ်နှင့်လူအုပ်စုဆပ်ဖို့သွား ...
5 မှဇူလိုင်လ 2019 14: 58
ခိုခို Flannel wrote:
24 မှဇူလိုင်လ 2019 18: 19
ဒတ်ခ်ျ level မှာအိတ်ဖြည့်သိသာတဲ့အဆုံးရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကဒါကြောင့်ထစ်များကဲ့သို့လုပ်ငန်းရှင်နှင့်ရာသီဥတုဘာသာတရားအားဖြည့်နိုင်အောင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သွေးဆောင်မှုနှင့်လူတို့တွင်ထပ်မံပြန့်ပွား, အထူးသဖြင့်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒတျချြနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရိုးသားသောယုံကြည်သူများနှင့်အတူဖွင့်သေးငယ်တဲ့ကြော်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုဘုရားကျောင်းတစ်နိမ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဖြစ်မကြာမီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဖြစ်နိုင်သောအသွင်ပြောင်းအဖြစ် (ကောင်းစွာ docile လူပုတိုင်းပြည်နယ်သာလန်အထက်) မြင့်မားသောအဆင့်မှာရည်ရွယ်ချက်မှာ, နည်းပညာ-လျှော့ချရုပ်ပါဝင်သည်ဟု, နည်းပညာ-controlled လူ့အဖွဲ့အစည်းအသွင်ပြောင်း (ကြှနျုပျတို့ '' နည်းပညာနှင့်ဗေဒငျသညျနှိပ်စက်လက်၌လက်ကိုသွား ) သှေးဆောငျသငျ့ကွောငျးသဗေဒအားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာနည်းပညာနှင့်အတူ။ တကယ်ကြီးမားသောပိုက်ဆံ၏ဤမျက်နှာသာ, အစစ်အမှန်အာဏာကို။
25 မှဇူလိုင်လ 2019 10: 55
ထိုအခါအကြံအဖန်အဖွဲ့အစည်းများအောက်မှဒီမှာ siwilliamism နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အပိုင်းအစလန်ဒန်မြို့ရှိရဲ့
24 မှဇူလိုင်လ 2019 18: 40
ငါသည်ဤဗေဒမှတဆင့်အာဏာကစားရည်ညွှန်း, (အခမဲ့ဗားရှင်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိတစ်နေရာရာလည်းမရှိ) ရက်တွင်စာအုပ် Anti-ဗိသုကာပျား Salingaros အကြံပြုပါသည်။ ရာသီဥတုဘုရားကျောင်းသည် Eco စိတ်ကူးစံဝါဒ / ကငျြ့တရား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဗေဒ, နည်းပညာအားဖြင့်ဗေဒနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ (/ Neo-မော်ဒန်ခေတ်သစ်အသင်းတော်ကိုကြည့်ရှု, ပါဝါ၏အခြားအဓိကနယ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗိသုကာဖို့ကန့်သတ်မရပေမယ့်ဗိသုကာအခြေခံနှင့်ပျံနံ့ဖြစ်ပါသည် post-ခေတ်မီ deconstructivism) ဒါကြောင့်အာဏာသင်္ကေတများနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့လူ့စိတ်ဝိညာဉ်အားထိန်းချုပ်၏နည်းလမ်းများကိုဆိုလိုသည် ...
စာရိတ္တနှင့်ရှင်သန်မှုမှရာသီဥတုဘုရားကျောင်းအယူခံ, ဗေဒ, seductive မှတဆင့်ဟာအလွန်အစွမ်းထက် tool ကနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်အားလုံးဒေသများအတွက်လေးရယ်မှအမြတ်ထုတ်သင့်သည်။
« သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ Deepfakes နှင့်မည်သို့ရှည်လျားသေးဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိသနည်း